Madaxwaynaha Puntland oo ka hadlay is-casilaaddii Shariif Xasan – Radio Daljir
Madaxwaynaha Puntland oo ka hadlay is-casilaaddii Shariif Xasan
Noofember 11, 2018 5:17 b 0
Madaxwaynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay khilaafka dowladda faderaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ayaa waxaa uu sheegay inuu ku salaysanyahay arrimaha faderaalismka ee dalka, isagoona sheegay dowladda inay isku koobayso awoodaha oo dhan, taasina ay suurtagal ahayn.
“Waxaan maamulaa Gaalkacyo ilaa iyo Caluula kun iyo laba boqol oo kiilo mitir, hadde dadka aan hogaamiyo aniga ayay iga sugayaan wax walba sida caafimaadka, waxbarashada iyo ammaanka” ayuu yiri madaxwaynaha Puntland oo sheegay dowladda faderaalka dhaqaalaha ay Beesha Caalamka ka hesho ay kusoo koobtay gobolo gaar ah.
Mar wax laga waydiiyay inay dowlad goboleedyada ay siyaasadda arrimaha dibadda u gacan dhaafayaan dowladda dhexe ayaa waxaa uu ku jawaabay.
“Aniga waxaan ka imid dal faderaal ah, guddoomiye kasta oo gobol Mareykanka waxaa uu xaq u leeyahay uu soo galaa heshiisyo caalami ah, mana ahan inaan Gaalkacyo ama Puntland gudaheeda kaliya isku koobo”
Madaxwaynaha Puntland ayaa ku eedeeyey dowladda faderaalka inay dhaqaalihii dowladda ay u adeegsanayso siyaasado gaar ah sida kala fogaynta maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed oo uu ku sheegay musuqmaasuq inay ka gashay, iyadoo xildhibaanada Koonfur Galbeed musuqmaasuq siinaysa.
Madaxwaynaha Puntland oo muddo xileedkiisa madaxwaynaha uu ka harsanyahay wax ka yar laba bilood ayaa waxaa ka mid ahaa aasaasayaashii Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada, kaasi oo markii hore lagu bilaabay shan madaxwayne, balse hadda kusoo koobmay sadex madaxwayne oo kala Galmudug, Jubaland iyo Puntland, waxaana khilaafka kala dhaxeeya dowladda faderaalka uu bilowday kadib markii ay kasoo horjeesteen go’aankii dowladda dhexe ay ka qaadatay khilaafka dowladaha Khaliijka.
Hoos kadhegayso isagoo ka hadlaya VOA-da
“Itoobiya, Soomaaliya iyo Eriteriya masii yeelan doonaan sadex madaxwayne”Abey Axmed